pedalo-gate Articles Archive - adore Cricket
Kuthunyelwe 15th November 2017 by Jon Scaife & wafaka ngaphansi England.
I Bowler sika Holding ... innuendo kusaqhubeka (138 ukubukwa)Cishe zonke fan cricket ayobe ewazwile lesisho edumile, kukhonjwe Brian Johnston, "Holding The Bowler sika, the Batsman sika Willey". Kungakhathaliseki noma cha lokhu ngempela kwakuthiwa bukhoma emoyeni engasekho okubalulekile omkhulu ...
Can red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi? (130 ukubukwa)Noma kukhathaza nje ukukhononda ngazibonela ngokwami ​​mayelana ekupheleni play (ngenxa yokuthi bese kumnyama) izolo ebusuku, Kwafika umcabango engqondweni kimi - nge ibhola elibomvu futhi pitch green, kungaba red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi ...
Yini engalungile ngokuzitika ICC test simo uhlelo? (104 ukubukwa)Noma ubani kanje test cricket bayokwazi ngalokho ukuthi zonke izinhlangothi zibekwa, Ngokwesibonelo, ngesikhathi sokubhala le eNingizimu Afrika (abathambekele) ranked the best side in the world. I've long felt that ...
A Umdlalo Izinzwa? (91 ukubukwa)Kuyinto sikhathi futhi - ebusuku kukhona eside, emoyeni kubanda, kodwa ngokushesha umsakazo ngeke nomlilo zibe nokuphila futhi alethe imisindo ehlobo Australian ezindlebeni zethu okuthile okungaziwayo. Ingabe England ukuza ...
Trent Ibhuloho - Ukuvivinywa phansi Umhlahlandlela (33,725 ukubukwa)In the yokuqala ochungechungeni oluhlelelwe "khaphi kuze ngezizathu" thina isici Trent Ibhuloho imininingwane kusakhiwo bomhlaba futhi izindawo ezingcono ahlale Ukuze uqale nge, nansi isithombe ...
I Bowler sika Holding ... innuendo kusaqhubeka (17,045 ukubukwa)Cishe zonke fan cricket ayobe ewazwile lesisho edumile, kukhonjwe Brian Johnston, "Holding The Bowler sika, the Batsman sika Willey". Kungakhathaliseki noma cha lokhu ngempela kwakuthiwa bukhoma emoyeni engasekho okubalulekile omkhulu ...
Can red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi? (6,474 ukubukwa)Noma kukhathaza nje ukukhononda ngazibonela ngokwami ​​mayelana ekupheleni play (ngenxa yokuthi bese kumnyama) izolo ebusuku, Kwafika umcabango engqondweni kimi - nge ibhola elibomvu futhi pitch green, kungaba red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi ...
Bonke entsha England, ngaphandle KP (5,105 ukubukwa)In the cricket izindaba enkulu usuku England isimemezele Kevin Pieterson ngeke kusaba amacebo abo, ngempumelelo ukuxoshwa batsman zabo eliphambili. Ekugcineni Lokhu sivukile angibhalele sihloko yami yokuqala ...
Ashes 2013: Team of the series (1,342 ukubukwa)Enye yezinto wangimangaza phakathi uchungechunge w ...
Bonke entsha England, ngaphandle KP (5,105 ukubukwa)In the cricket izindaba enkulu usuku England babe Ann ...
Just plain ngokungacabangi: Darren Lehman (2,712 ukubukwa)Ngakho Darren Lehman, umqeqeshi Aussie, uye wabiza ...
BROADside eNgilandi mayelana abadlali kokuphumula (1,889 ukubukwa)Njengoba ngihlezi ngilalele T20 freak-show (it lake ...